Ezi zizinto ezininzi zokuthintela uKim Dotcom oza kuzithatha kwi Megaupload entsha | Iindaba zeGajethi
Kangangexesha elithile besisazi kwezethu UKim Dotcom ukuba kukho iqela labaphuhlisi abenza elitsha Ukulayishwa kweMega Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kwindalo iphela kwaye ngaphezulu kwayo yonke imisebenzi ephuculweyo xa kuthelekiswa naleyo besiyazi sonke kwaye ivaliwe ngokomyalelo we-FBI phaya ngo-2012.
Ixesha kunye neenyanga zityhile uthotho lweenkcukacha malunga neqonga elitsha le- ukugcinwa kwelifu nangona bekungoku nje kupapashwe uthotho lweempawu ezenza ifayile ye- amanyathelo athathiweyo ukwenzela ukuba into efanayo neyexesha elidlulileyo ingenzeki kwaye iqonga kufuneka livalwe.
Emva komjikelo oneziqhamo wezemali ngokusebenzisa iqonga lokubuyisa imali Ibhanki kwixa elizayo, apho kungekho nto ingaphantsi Isigidi esinye seedola Enkosi kubatyali mali abangama-354 abangaziwayo, inkampani esekwe nguKim Dotcom ephuhlisa ingxelo entsha yeMegaupload ibhengeze ukuba, phakathi kwezicwangciso zayo zokuphucula, yayiyi outsource uninzi logcino kubanikezeli beqela lesithathu.
Ngale nto engqondweni kufuneka siyiqonde loo nto, kule nguqulo intsha yeMegaupload iqonga aliyi kugcina ngokuthe ngqo zonke iifayile kumaseva alo, kodwa ndenze isigqibo sokusebenzisa ezinye iintlobo zeenkonzo, ezinje Stroj o Madisafe yokugcina kwaye baya kusebenza njengomboneleli we-caching weefayile ezithandwayo kwiiseva ezinesantya esiphezulu khonza iifayile ezivela kwi-RAM.
UKim Dotcom ubhengeza iMegaupload kwiOutsource uninzi lweeSeva zayo
Ukongeza koku, amanyathelo aya kuthathwa sukucima iifayile ngokuzenzekelayoOko kukuthi, xa isicelo sifunyenwe kwabanamalungelo okushicilela, ifayile ekubhekiswa kuyo ayisayi kucinywa ngokuzenzekelayo njengoko ibisenziwa ukuza kuthi ga ngoku, kodwa kuya kubakho iqela eliza kuphendula kwisicelo kwaye livavanye ukuba esi sicelo susa umxholo othile uyinyani okanye ubuqhetseba.
Okokugqibela andinokwazi ukuthi ntle ngaphandle kokukhankanya ukufika kwe I-Bitcache kwiinkqubo zokuqhubela phambili ukhuseleko kunye nokuqinisekisa ukuba ukuthengiselana akaziwa. Ukongeza koku, inkampani ngokwayo iya kongeza eyayo ungqimba lwe-encryption yayo 'Hlawula ngokukhuphela nganye«. Ngaphandle kwamathandabuzo, uninzi lwethu ngabasebenzisi abangathanda ukuvavanya ngokwabo into ephuhliswayo phantsi kwegama Megaupload 2.0 nangona, njengathi sonke, kuyakufuneka silinde, ngokomgaqo kude kube nguJanuwari 20, nangona, njengamagqabantshintshi Dotcom, lo mhla ungamiswa:
Akunakulindeleka ukuba sizokwazi ukusungula nge-20 kaJanuwari. Ukunyusa ingxowa-mali kulibazisekile kwaye iqela lezomthetho lifuna ixesha elingakumbi kuseto olutsha. Kodwa siza kutyhila iinkcukacha ezithe kratya malunga neMegaupload 2 kunye neBitcache ngala mhla ukhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ezi ziindlela ezininzi zokuthintela uKim Dotcom oza kuzithatha kwi Megaupload entsha